Awood Shakhsiyeed ‘ With Massive Arms│Sports News Headlines Global Articles WebSite.WS | Gvmg - Kooxda Suuq-geynta Global Viral
Awood Shakhsiyeed ‘ Iyada oo Hubka Waaweyn
Xusuusnow markii aad dhigan jirtay Dugsiga Sare. Dad badan iyo shakhsiyaad. Ragga waaweyn, af waaweyn, rag qosol badan, gals funny iyo qaar badan oo badan oo ka mid ah carruurta naxariista leh. Waa tan mid aan u malaynayo inaad la xidhiidhi doonto. Dareenkeygii ugu horreeyay ee Gillie wuxuu ahaa sidii 12 sano jir. Wuxuu ahaa mid aad u weyn. Waxaan xasuustaa feker ah inaanan rabin inuu igu dhufto. Haddii aan Gillie ku jiri lahaa kooxdayda waan ogaa inaan qarka u saarnahay. Faa'iido xoog leh. Gillie wuxuu ahaa Paul Bunyon ee xaafadayda. Wuxuu lahaa 20-22 biceps, iyo qoorta ku dhowaad sidii wareegsan. Miisaanka 220 rodol, wuxuu taagnaa lix fuudh iyo hal inji, baruurna kuma lahan jirkiisa. Ma aha ounce ah xaydha. Weligay ma arag qof isaga oo kale ah noloshayda. Wuu gaaday markuu socday. Nooca socodka qof uu maro markuu ogaado inuusan lahayn wax cabsi ah. Naanaysta ayaa ahayd Mr Clean. Wuxuu u muuqday wax badan sida astaanta nadiifinta. Marka laga reebo Gillie oo aan lahayn dhego. On dheemanka baseball, Gillie wuu fiicnaa. Rasaastiisii ​​fangaska ee uu ugu diray bannaanka hore ee kululeynta ciyaarta ka hor wuxuu taabtay qaybo ka mid ah cirka oo badanaa loogu talagalay diyaaradaha yaryar ee matoorka ah. Wuxuu ka baqay kooxda kale. Wuxuu umuuqday Mickey Mantle, Harmon Killabrew iyo Ted Kluzewski dhammaantood waxay noqdeen hal. Dharbaaxida kubbadda jilicsan ayaa ahayd meeshii Gillie ay ku fiicnayd. Rasaastiisii ​​waxay ahaayeen halyeey. Waxa uu ka mid ahaa dad fara ku tiris ah oo kubbadda ku garaacay xayndaabka saxda ah ee garoonka. Xayndaabku wuxuu ahaa 270 ‘ 280 cagaha ka fog oo fuulay 40 cagaha sare. Wuxuu ahaa qofka kaliya ee aan abid arko oo garaacaya kubad kor ka koraysa xayndaabkaas oo kuyaala Wadada Goldsmith. Ku garaacistiisa waxay umuuqatay mid sii kordheysa markii ay deyrka banneeyeen. Aniga ahaan, Gillie had iyo jeer wuxuu matalayay xoog, u hibeynta iyo ahaanshaha nin wanaagsan oo dhab ah. Weligiis uma adeegsanin cabirkiisa iyo xooggiisa inuu dadka kale hoos u dhigo. Waxay ahayd dariiqii uu isagu isku dhisi lahaa. Haddii uu dharbaaxay gacan midig ama bidix waxaad had iyo jeer arkeysaa dibedda oo dib loo soo celiyo iyo indillku u wareego meelo aad u qoto dheer. Xor ayaad u tahay inaad tan u gudbiso qof kasta oo aad u maleyneyso inuu ku raaxeysan doono akhriska ku saabsan baseball. Awood Shakhsiyeed ‘ Iyada oo Hubka Waaweyn
Posted Articles Title : Awood Shakhsiyeed ‘ Iyada oo Hubka Waaweyn
■Link To This Post (HTML code) : Awood Shakhsiyeed ‘ Iyada oo Hubka Waaweyn
■Trackback URL : Awood Shakhsiyeed ‘ Iyada oo Hubka Waaweyn
Dib u eegista Ganacsatada Soca – Fiican Mise Xun?
Taariikhda Kubadda Cagta England
Iyada oo loo yaqaan 'Humminbird Matrix' 10 qaboojiye buuxa oo kalluunka ah marwalba waa suuragal
Layli ciyaarta Golis wax ku ool ah
Tartamada turub ee bilowga ah
Barnaamijka Jimicsiga Jimicsiga Kubadda Cagta ee 'Golf Fitness Jimics' wuxuu soo afjari doonaa niyad jabkaaga koorsada
Samee iyo Ha u Sameynin Mareykanka Sannadkan Davis Cup
Guryaha lagu koriyo ee lagu caweeyo
Qeybta Birta Birta 7
Sida Loo Qabto Bass Largemouth
Dulmar guud oo ku saabsan Calanka Quusitaanka
Baaskiiladaha Baaskiiladaha Iyo Shaagagga, Baaskiilkaaga Baaskiilku Meel Walba Ayuu Marayaa Iyaga La'aan
Dhaqdhaqaaqa Swing Golf Vital wuxuu keenayaa Guul
Farshaxan dagaal oo isku dhafan-Baro Shuruudaha
Farsamoyaqaannada Golf Golf-ka Si Deg Deg Ah Ayaa Loogu Hormarin Karaa
Farsamoyaqaan golf golf lulid waa shuruud u ah waxqabadka golf fiican. Hadaad tahay sida kuwa golf-ka badankood, waxaad had iyo jeer isku dayeysaa inaad nuqul ka sameyso ‘kaamil ah’ lulid golf. Waan ogahay inaan ahay. Miyaanay fiicnayn in la garaaco rasaastaas bilaa tacabka ah? Miyaadan rabin inaad sameyn kartid markasta? Taasi waxay noqon laheyd dareen la mid ah waxa pro-ku haysto inta badan waqtiga. Waxay noqon laheyd heer sare! Marka maxaa kaa hor istaagaya inaad hagaajiso mekaniskada lulid golf? Miyaad u maleyneysaa inaad kaliya ubaahantahay inaad garaacdo kubado badan? Ama, miyaad kolba boqolaal garaacaysaa toddobaad kasta? Haddii taasi shaqeyn weydo, ma u baahan tahay casharo golf badan? Ama, cashar ma qaadatay laakiin horumar ma arag? Haddii aysan ahayn kuwa kor ku xusan, hadana maxaa? Waan kuu sheegi karaa ku dhowaad 100% hubaal waa jidhkaaga! Jirkaaga ayaa qeexaya sida ugufiican ee aad ula shaqeyn karto makaanikada lulid golfkaaga. Imisa jeer ayaad dareentay inaadan sameyn karin BUUXI ama gadaal dambe? Miyaad u maleyneysaa in xalka uu garaacayo kubbado badan ama qaadanayo casharo golf badan? Maaha! Waxay hagaajineysaa jilicsanaantaada gaarka ah ee golf-ka iyo xitaa xoogga. Markaad wax ka qabato oo aad hagaajiso xaddidnaanta jireed, farsamooyinka lulid golf aad meel ku dhici, dadaal aad u yar. Haddii aadan haysan fikrad ah waxa loo baahan yahay in la sameeyo si loo dhammaystiro lulid golf-ku habboon, taas oo qaadashada cashar golf ah si loo fahmo waxay noqon doontaa mudnaanta koowaad. Inta badan golfers hiwaayadda waxay leeyihiin nooc ka mid ah xaddidaadda jireed ee ka ilaalinaysa ciyaar weyn oo golf ah. Waxay noqon kartaa dabacsanaan, ama waxay noqon kartaa xoog. Isku darka labada ayaa ah habkaaga ugu wax ku oolka badan. Helitaanka qiimeyn khaas ah oo golf-ka ah oo ku takhasusay xirfadlaha jimicsiga golf-ka ayaa ah tallaabadaada ugu horreysa. Kadib, waxaad dejin kartaa qorshe ciyaar oo ku saabsan waxaad u baahan tahay inaad ku shaqeyso iyo sida loo sameeyo. Waad la yaabi lahayd sida ugu dhakhsaha badan ee aad ugu hagaajin karto ciyaartaada golf-ka iyo ciyaarta qaabkan. Ha sii wadin raadinta rasaasta qalinka ah. Jawaabtu waxay ku jirtaa muraayadda. Ku hagaajinta farsamooyinkaaga golf-ka ee loo maro jimicsiga ayaa ku siin doona weynida ku soo noqoshada maalgashiga. Farsamoyaqaannada Golf Golf-ka Si Deg Deg Ah Ayaa Loogu Hormarin Karaa
Qalabka Badbaadada Baaskiilka
Fuula Ammaan (Qalabka Baaskiil Walboo Leh Waa Inuu Lahaa Socodka) Runtii way fududahay in dayactirka joogtada ah lagu sameeyo baaskiilkaaga. Haysashada qalabka saxda ah ee shaqada waxay macnaheedu noqon karaa farqiga u dhexeeya raaxaysiga maalinta oo dhan raacista iyo haysashada baaskiilkaaga oo aad dib ugu laabatid guriga markii wax xumaadaan. Marka, qalab noocee ah ayaad u baahan tahay inaad raacdo si aad u raacdo? Marka ugu horeysa, waa inaad heysataa qalab aad ku dayactirto dabka fidsan. Xiga, maalgeli qalabka loo baahan yahay si loo ilaaliyo silsiladdaada iyo bareegyadaada. Qalabka Badbaadada Baaskiil Qalab badbaado baaskiil aasaasi ah waa inuu ku jiraa: Qalabka xirmooyinka Taayirada Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Wareegga ah ee tuubbada xajmiga leh ee qiyaaso kala duwan Qalabka xirmooyinka badbaadada baaskiil aad u ballaaran ayaa ka mid noqon doona: Nadiifiyeyaasha silsiladaha 'Solvents' oo si gaar ah loogu talagalay silsiladaha silsiladaha Waxyaabaha La Sifeeyo ee La Baadho Ka Hor Inta Aysan Ku dhicin Bareegyada Wadada: Hubinta in biriigaagu si fiican u shaqeynayo aad ayey muhiim u tahay. Hubso inaad iska hubiso suufkaaga inta badan si looga hortago waxyeelada darafta iyo in la hubiyo in baaskiilku uu istaagayo markii loo baahdo. Isku hagaajinta xiisadda sidoo kale waa muhiim. Silsilad: Jebiso silsiladda oo dib u cusbooneysii. Ku nadiifi jeexjeexyada dambe ee qalabka burushka. Gears: Hubi falka iyo qalabka fiilooyinka derailleur. Silsilad degrease iyo dib-u-lube. Ku nadiifi jeexjeexyada dambe ee qalabka burushka. Baabulo: Hubso in dariiqku u wareego si xor ah. Ka hubi dhexda qeybta hoose ee dabacsanaanta. Wadida: Hubso in shaashadda iyo jirriddu ay adag tahay. Jir: Hubi waxyeellada. Hubso in kursiga si habboon loogu hagaajiyay dhererkaaga. Giraangiraha: Hubso in af-hayeennada iyo ibta la adkeeyay isla markaana giraangiraha ay yihiin kuwa waaweyn. Hubi cadaadiska taayirka iyo xaalada. Haddii fargeetadaada ganaaxa si dhakhso leh loo sii daayo, hubi inay si adag isugu xidhan yihiin, hana iloobin inaad hubiso cadaadiska taayirada. Qalabka Badbaadada Baaskiilka
Kubadaha golf-ka ee ugu horreeyay waxaa la raadiyay dhammaadkii qarnigii 18-aad waxaana laga sameeyay alwaax Scotland. Waxay ahaayeen kuwo u nugul canaasiirta waxayna ku dhammaadeen dildilaac. Horaantii qarnigii 19aad waxaa la arkay soo bixitaanka kubbadda baaldiga ah, oo ka samaysan harag oo aad loogu adkeeyay baalal. Kubadani waxay noqotay mid caan ah ilaa “guttie” gelitaankeeda, oo ka samaysan caag adag oo gutta-percha ah. Waxay ahayd mid sii adkaysata oo leh iska caabin adag oo ku saabsan canaasiirta. Saynis fara badan ayaa gashay sameynta kubbadda golf-ka ee casriga ah tan iyo maantana kubbadaha golf-ku waa isku-darka sayniska ee kiimikooyinka iyo polymer-ka oo si sax ah u sii fogaanaya. Kubadaha Golf-ka maanta waa saddex nooc – laba-gabal, saddex-gabal iyo waxqabad sare. Kubbada labada qaybood ah waxay ka samaysan tahay xuddun adag iyo dabool waxayna siisaa masaafo ka sii fiican iyadoo lulid gaabis ah, halka saddexda qaybood ee kubaddu ka samaysan tahay xuddun adag, ku dhaawacan laastik ka dibna la daboolo, oo bixiya kantarool badan. Kubadaha waxqabadka sare waxaa loogu talagalay saxsanaanta. Kubadaha labada qaybood ayaa loogu talagalay kuwa bilowga ah iyo noocyada kale waa kuwa golf-ka horumarsan. Daboolka guud ahaan waxaa laga sameeyaa Surlyn ama Balata. Surlyn wuu sii adkaysanayaa oo xoog badan yahay halka Balata uu ka jilicsan yahay wuxuuna siiyaa xajin fiican iyo xakameyn leh wareegga. Balata waxaa doorbidaya inta badan golfers. Kubadaha laba qaybood ka jaban ayaa aad loo heli karaa. Kubadaha seddex-geesoodka ah iyo waxqabadka sarreeya waa kuwo aad qaali u ah oo loogu talagalay xirfadlayaal iyo ciyaartoy horumarsan. Doorashada kubbadda golf-ka waxay noqon kartaa khiyaano, haddii aad doorato kubbadda uu adeegsan jiray Tiger Woods, looma baahna inaad yeelan karto curyaannimo la mid ah tan uu qabo. Xulashada waa in loo sameeyaa sida aad adigu uhesho qaabka ciyaarta. Kubadda qaldan waxay ku siin kartaa naafooyin ka waaweyn isla markaana kubbadda saxda ah waxay kaa dhigi kartaa inaad dareento sidii horyaal. Doorashada kubbadda golf-ka waxay ku xirnaan doontaa leexashadaada iyo qaabka ciyaarta. Hadaad wali wareersan tahay, waxaad isku dayi kartaa mid kasta oo ka mid ah noocyada maalmo yar markiiba oo isbarbar dhig natiijooyinka. La mid ah xulashada naadiyadaada golf-ka, dooro kubbadda golf-ka ee ku habboon lulidaada iyo ciyaartaada si aad meesha uga saarto daciifnimada oo aad ugu dul dhisato xooggaaga. Weligaa ha u marin sumado, noocyada ayaa ah kuwa labaad ee waxqabadka iyo ku habboonaanta. Hubso inaad jeceshahay kubbadda golf-ka maxaa yeelay way ka fiicantahay ciyaartaada, ma ahan sababtoo ah waxaa sameeyay Nike ama Yonex. Ugu dambeyntii, ha u dhicin kubbadaha golf-ka ee shakhsiga ah iyo kuwa astaanta u ah, waa uun ibtilooyin. Xullo Kubadda Golf-ka Midig Si Aad U Horumariso Ciyaartaada Golf-ka
AA V KK Xun Xun
Hambalyo Dhamaantiin, Waxaan ku ciyaarayay ciyaar lacag kaash ah, 20/40 xad lahayn, Markii aan helay gantaallo gantaallo ah. Xilli dambe ayaan ku jiray qof walbana wuu soo wacay ka hor inta uusan flop ilaa uu ka imaado ninkii iga horeeyay ee soo koray 200. Ayaan dib u koriyay 500 isaguna wuxuu iigu jawaabey aniga oo isoo koriya 800 ka dib qof kasta oo kale laalaab. Waxaan u dhigay KK dib-u-soo-kordhin sidan u weyn laakiin waxaan si cad u hoggaaminayey AA anigoo maanka ku haya in AA guuleysan doonto 88% waqtiga madaxyada kor, Waxaan u galay oo dhan in yar ka badan 1500, wuu wacay. Marka hadda waxaa jira wax ku saabsan 3200 sii ama qaado xoogaa yar oo dheriga ku jira oo xitaa maanaan arag flop weli. Hubaal inuu ku wareego KK anigana AA-ga ayaan wareejiyaa, xilligaas oo aan sharad ku galay inuu calooshu ku dhacday. Laakiin Ilaah Poker-ka ah meesha aan iigu dhoolacadeynaynin sida foosku u soo degay…………K K 6 Qarow, wuu fuulayaa 4 nooc ka mid ah waana ogahay inaan u baahanahay iyo mucjiso buuxda si aan hadda u badbaadiyo, taas oo dabcan aan dhicin. Marka, Ma waxaan sameeyay wixii saxda ahaa ee aan ku dhexjiraayay mise waa inaan wacaa 800 oo wuxuu arkay flop? Haddii aan heli lahaa waan badbaadi lahaa naftayda 700 laakiin dabcan haddii flopku uu ka duwanaan lahaa waxaanan la galay inta ii hartay 700 waxay u badan tahay inuusan soo wicin haddii Ace uu soo baxo ama lagu dhaqo ama si toos ah loo sawiro. Haddii aysan waxba soo bixin markaa wuxuu si bareer ah ugu yeeri lahaa dhammaan meeshaas. Waxaan dhihi lahaa in wax walba oo la galo ay aheyd wax sax ah oo la sameeyo, Waxaan haystay gacanta ugu fiican waqtigaas. Sikastaba, uma xuma sida inaad AA u garaacdo qof toos uga samaynaya webiga oo leh a 7 9 gacantooda ayaan ku aqaan. Marka anigu ma aqaano haddii ay runti u qalanto garaacid xun laakiin haddii aan dareemay xun xun waqtigaas… ;O) Farxad wada, John AA V KK Xun xun
5 Qalabka Sare ee Tareenka Qaaliga ah
Dad badan hordhacoodii ugu horreeyay ee qaabka tareenka tareenka ah wuxuu la socdaa wareegga fudud ama oval ee ku yaal xaashida plywood. Muuqaal malahan, ma laha dhul-qurxin iyo malaha xitaa dhismeyaal ama gawaari. Waqti badan ma qaadato, sikastaba, si aad u hesho rabitaan ah in la bilaabo ku darida qalabka tareenka si ay uga dhigto mid macquul ah. Dad badan, tani waxay noqotaa dadaal nololeed, oo kori kara ilaa heer aad u ballaaran. Qaabdhismeed kastaa wuu ka duwan yahay qof walbana wuxuu leeyahay agabkiisa u gaarka ah, laakiin soo socda 5 sheyadu waa qaar ka mid ah qalabka ugu caansan ee ku daraya heer xaqiiqda iyo xiisaha aad u leedahay tareenkaaga moodeelka. 1. Saldhigga Tareenka Tani waa mid ka mid ah dhismayaasha ugu horreeya ee dadka badankood ay ku daraan qaabkooda. Waxay siineysaa wadada tareenka barta bilowga iyo dhamaadka waxayna badiyaa u adeegtaa aasaaska magaalo dhan ama magaalo in laga dhiso hareeraheeda. 2. Laydh Waxaa jira noocyo badan oo nalal ah oo loogu talagalay jidadka tareenka. Waxaa jiri kara iftiin dambe si loo helo taariikh dhab ah ama nalalka waddooyinka si loogu daro jawiga magaalada. Kuwani waxay si adag u noqon karaan qurxinta, ama waxaa laga yaabaa inay dhab ahaan iftiimaan habeenkii si waddooyinka loo siiyo dhalaal macquul ah. 3. Gawaarida Tareenka tareenka tareenka tareenka tareenka tareenka laga raaco ayaa badanaa dareenka ugu badan hela marka la samaynayo tareen tareen, laakiin waxaa jira xulashooyin badan oo tareenka la raaco sidoo kale. 4. Dadka iyo Xayawaanka Magaalada ama barxadda tareenka ma dhammaystirna la'aanteed iyadoo aan dadku qayb ka ahayn naqshadeynta. Iyo haddii qaabkaagu u dhex maro buuraha ama baadiyaha, xayawaanku waxay ku daraan taabashada dhabta ah qaabeynta. 5. Naqshadaynta dhirta Waxaa jira xulashooyin badan oo loogu talagalay qurxinta waddada tareenka. Waxaad ku dari kartaa waxyaabaha sida cawska oo kale, geedaha, harooyinka ama wabiyada hareeraha wadada. Ama waxaad ka heli kartaa wax yar oo qoto dheer oo waxaad ku dari kartaa buuro iyo dooxooyin tareenkaagu ku dhex mari karo, iyo godad buuraha dhex mara. 5 Qalabka Sare ee Tareenka Qaaliga ah
Waa Maxay Suul Kulul oo La Qaadan Karo?
Isboorti la qaadan karo waa isbooris taas oo ah, si saraaxad leh, la qaadi karo. Isbeel la qaadan karo ama tubbada kulul ayaa loo wareejin karaa meelo kala duwan haddii loo baahdo. Waxay u muuqdaan kuwo aad u jaban, hadana soo jiidasho leh, beddelashooyin isbaarooyin go'an. Dhab ahaan, waxay ku siin karaan dhammaan waxtarka dalxiis ama tubbo kulul kharash la'aan. Tuubbooyin kulul oo badan oo la qaadan karo ayaa la buufin karaa oo aan lahayn qolof adag. Tani waxay u sahleysaa inay ku wareegaan. Kuwa ugu habboon ee kuwan ka mid ah waa is-buufin oo waxay noqon kartaa daqiiqado gudahood oo aad diyaar u tahay inaad isticmaasho. Qaar badan oo ka mid ah goobahan la qaadi karo ayaa sidoo kale bixiya dayuuradaha qulqulaya ee biyaha kuwaas oo inta badan si fudud ku hawl yar. Qaar badan oo ka mid ah unugyadan la qaadan karo ayaa iyaguna leh kuleyl, hadaba khibradaada qoynta iyo dayuuradaha biyaha qulqulaya waxay ku siin doonaan duugis nasasho leh faa'iidooyin caafimaad oo badan. Meelaha kale ee caanka ah ee la qaadan karo waxaa ka mid ah tubbooyin kulul oo alwaax ah ama moodello muraayad la qaadan karo oo loo wareejin karo hadba sida loogu baahdo. Aad ayey uga jaban yihiin moodeellada la rakibay oo markii aad guureysid guriga ayaa lagu qaadan karaa. Si kastaba ha noqotee, taxaddar waa in lagu sameeyaa isbaasiyada la qaadi karo ee lagu wareejinayo maxaa yeelay ma ahan kuwo adag sida moodooyinka rakiban si fududna waa loo dhaawici karaa. Ku rakibida tuubbooyinka kulul ee la dhisay ayaa guud ahaan aad qaali u ah, markaa tuubbooyinka kulul ee la qaadan karo waxay bixiyaan keyd weyn oo ku saabsan aaggan oo keliya. Haddaad meel ka bannaan tahay, sidoo kale waa la soo dejin karaa oo la xirin karaa ilaa mar kale la doonayo. Waxaa jira noocyo kala duwan oo moosas oo la qaadi karo ah oo suuqa yaalla, markaa hubaal waxaad leedahay ikhtiyaar. Waqti qaado si aad u tixgeliso faa'iidooyinka alaabooyinka kala duwan oo fiiri dib u eegista khadka tooska ah. Meelaha la qaadan karo iyo tuubbooyinka kulul badanaa waxay bixiyaan astaamo isku mid ah oo lagu dhisay meelaha loo yaqaan 'spa' qayb yar oo ka mid ah kharashka. Sababtaas awgeed keliya, haddii aad tixgelinayso inaad iibsato spa, spa la qaadan karo ayaa ku siin kara dhammaan faa'iidooyinka hudheel dhaqameed leh faa'iidooyinka dheeraadka ah ee dheeraadka ah ee keydinta kharashka iyo wareejinta. Waa Maxay Suul Kulul oo La Qaadan Karo?
Halka Laga Helo Meelaha Ugu Wanaagsan Ee Lagu Kayiro Biyaha Cad
Kawareega Whitewater wuxuu leeyahay meelo badan oo aad ufiican aduunka oo dhan oo loogu talagalay kayaakaro cusub iyo kuwa khibrad leh. Bariga Mareykanka waxay leedahay qaar ka mid ah xaaladaha ugu wanaagsan ee biyaha cad ee aad ka heli karto. Haddii aad tahay kayaker khibrad leh, waxaad u badan tahay inaad horeyba u ogayd in bariga Mareykanka uu ka mid yahay meelaha ugu wanaagsan ee laga raaco kaxaynta biyaha cad. Adduunku wuxuu leeyahay meelo badan oo caan ku ah kaayrin weyn, laakiin bariga Mareykanka. waxay leedahay dhowr meelood oo cabsi badan oo loogu talagalay xirfadleyda iyo dadka cusub. Halkan waxaa ku yaal liistada meelaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay kayaking whitewater. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad qorto maxaa yeelay waa wax cajiib ah. Ha moogaan! Hudson River Acadia National Park Champlain Pine Barrens, NJ Oswegatchie Webiga Allagash Wilderness Waterway Adirondack Park Waxaa laga yaabaa inaad maqashay qaar ka mid ah meelahan. Mid kastaa wuxuu caan ku yahay adduunka oo dhan oo loogu talagalay xiisaha kayaking. Fasallo ayaa la heli karaa haddii aadan ku qanacsanayn khibradda biyaha cad. Adoo qaadanaya casharro intaadan bixin, waxaad ogaan doontaa in guusha kayak ay waxbadan ku qabato kalsooni. Dad badan ayaa ka baqaya inay biyo qulqulaan. Dad isku mid ah ayaa isbarbar dhiga raafka iyo kayak, laakiin ciyaar kasta gabi ahaanba waa ka duwan tahay. Hadaad tahay qof, waa lagama maarmaan in la ogaado kala duwanaanshaha weyn ee u dhexeeya cayaaraha. Dad badan ayaa aamminsan in kalluumeysiga biyaha cadcad ay aad uga xiiso badan tahay raafka. Khatar gal! Raadi kaligaa! Khatar ma aha. Haddaadan isku kalsoonayn, waxaad si fudud u lahaan kartaa macalin ama xirfadle kula raaci kara xawaaraha xawaaraha. Kaaraking-biyoodka waxaa lagu sameyn karaa hawo kulul ama qabow. Haddii aad leedahay dhar-qoyan, waad ku raaxeysan kartaa xilliga kayak kayaking sanadka oo dhan! Tixgeli goobahan safarka ah ee kayak-ka ah oo aad midkood u tagto! Si weyn ayey kuu cajabin doonaan markaad timaado. Dhawaan waad ku raaxeysan doontaa xiisaha xiisaha leh iyo sarre ee kayak on Rapids. Halka Laga Helo Meelaha Ugu Wanaagsan Ee Lagu Kayiro Biyaha Cad
What is Billiard? I mean what is the true definition? We hear people talk about playing pool or sometimes it is referred to as billiards. I did some research and found that billiards is of course the plural of billiard. The definition to me has always been a ball deflecting off another and striking another. (bartilmaameed) like a Carom. (Three Cushion Billiards) I did a search on Ask dot com. Most of the online dictionaries including Webster’s referred to it as the singular of Billiards. The first result on the Ask dot com page defined it as an adjective and stated see also Carom. Below I provided Wikipedia’s definition. A billiard is a dynamical system where a particle alternates between motion in a straight line and specular reflections with a boundary. When the particle hits the boundary it reflects from it without loss of speed. This means that if you hit the edge of the one ball with the edge of the cue ball, and then the cue ball travels along the tangent line and strikes the nine ball, you have executed a billiard. Last night in a BCA Pool League match, I had solids (small number balls) and my opponent had stripes. One of my solids was right behind one of his stripes and that particular striped ball was next to the corner pocket. I hit the edge of my solid ball thin and the cue ball rolled into the stripe, putting it in the pocket and then stopped behind my solid ball. I made a billiard on his stripe and executed a safety in the same shot. Cool. My opponent failed to hit one of his stripes on the next shot and I took cue ball in hand and ran the rack. Thanks to a billiard and safety shot, I was able to win the game. Billiard shots will come up quite often if you know what to look for. I wrote this article to help you understand the true meaning of the word billiard. I still think of the above examples as a carom. Si Aad U Gaadho Guushaada. Ted Billiard. What exactly is the definition of this word?
Shil Naxdin Leh Inta Lagu Jiray Tartankii Indy
Shil naxdin leh ayaa qaaday nolosha Paul Dana intii lagu jiray maalintii furitaanka Indy Race ee Homestead-Miami Speedway Axaddii la soo dhaafay. Ed Carpenter ayaa xakamayn waayey wuxuuna gaarigiisii ​​ku jiiray darbiga markii xoogaa wareejintiina uu kudhamaaday bartanka tartanka orodka. Inta badan wadayaasha gawaarida ayaa ka fogaaday inay garaacaan gaariga Carpenter laakiin Dana ma aysan awoodin. Wuxuu ku dhacay xawaare qiyaas ah oo ah 200 mayl saacad ah inta lagu gudajiray kululeynta tartanka xilli-furanka. Paul Dana oo ahaa 30 sano jir ayaa dhintay duhur ka hor. Tani waxay ahayd markii ugu horreysay ee Dana ay u tartanto kooxda Rahal Letterman Racing Team. Kadib shilkii foosha xumaa intii lagu gudajiray Toyota Indy 300 labada kale ee isku kooxda ah: Danicka Patrick iyo Buddy Rice kama qeyb geli doonaan tartanka iyagoo ixtiraamaya Dana. Nijaarka waxa ku dhacay sambabka oo nabar ku dhacay, waxaana laga sii daayay isbitaalka Jackson Memorial Hospital ee ku yaal magaalada Miami maalintii isniinta. Sida ku xusan bayaan uu soo jeedo oo feejigan yahay. Waxa qof kastaaba isweydiinayo hadda waa maxay sababta Dana u arki weyday calaamadaha. Nalalka hurdiga ah ee meesha si loogu wargaliyo inay wax dhacayaan waana inuu taxaddaraa. Madaxweynaha IRL Brian Barnhart wuxuu cadeeyay in xitaa markii taxanaha uusan ugu yeerin baaritaan, waxay fiirinayaan shilka: tan waxaa ka mid ah dib u eegista fiidiyowga dhacdada, calaamadaha taraafikada ee wadada iyo baabuurta ku lugta leh. Shil Naxdin Leh Inta Lagu Jiray Tartankii Indy
Baasaboorka Oo Ulaha U Kala Bax
Teknolojiyada casriga ahi waxay noo soo saareen waxyaabo badan oo sahlan oo sahlan. Kalluumeysatada jecel kalluunka, mid ka mid ah tiknoolajiyada casriga ah ee ku darsaday ayaa ka muuqata horumarinta usha kalluumeysiga duqsiga. Asal ahaan, duullimaadda kalluumeysiga ayaa si fudud looga sameeyay bamboo iyo bakoorad kala qaybsan. Laakiin ka hor inta aan la ogaan bamboo loo adeegsado kalluumeysiga duullimaadka, waxay ahayd alwaaxda kuleylaha ah ee loo yaqaan 'greenheart' oo laga heli karo gobolka Guangdong ee Shiinaha kaas oo badanaa loo isticmaali jiray maadada ulaha kalluumeysiga duqsiga. Ulaha lagu sameeyo baasaboorka ee kalluumeysiga ayaa sii hayey caan ahaanshahooda in kasta oo ay sii kordhayaan tirada muraayadaha fijarka iyo ulaha lagu sameeyo garaafka. Sababta ka dambeysa tan waxay si fiican ugu dhici kartaa nimcada iyo adkeysiga walxaha bamboo. Bamboo ama ulaha kala go'ay ayaa si fiican loogu yaqaan qaabkooda wanaagsan, tiro adag, xoog iyo dabcan nimcada ay siiso kalluumeysatada duqsiga. Sababta kale ee ulaha bamboo-sameeyaha loo adeegsado wali loo adeegsado maanta waa sababta oo ah habka xulashada, farsamaynta iyo dhammeynta hal ul waxay qaadataa waqti dheer tayada ay siiso waa mid aan shaki la gelin karin. Kalluumeysatada duullimaadka horumarsan, ulaha bamboo ayaa badanaa laga doortaa kuwa ka samaysan fiberglass-ka ama garaafka maxaa yeelay waqtiga la cunay iyo u-hureynta uu sameeyaha ul-bixiyuhu bixiyaa waa horeba bayaan tayo iyo hubin ah. Laakiin xulashada ulaha bamboo sidoo kale waa qaali. Ulaha tayada leh waxay ku kici karaan wax badan illaa US $ 2,000. Ulaha ay sameeyaan kuwa casriga ah ee wax dhisa waxay sameeyaan tartan adag sidoo kale waxay ka hortagaan khubarada sameeya usha kala jaban maxaa yeelay badeecad dhammeysay waxay ku kici kartaa ku dhowaad sida ulaha tayada. Markay tahay tuurista, ulaha bamboo waxay bixiyaan saameyn kale. Dadka xiiseynaya duullimaadka kalluumeysiga xilliga firaaqada waxay la kulmaan qaab jilicsan ama gaabis ah oo loo tuuro halka dadka ku raaxeysta hiwaayaddan tartan ahaan, usha bamboo ayaa siisa waxqabad weyn xaaladaha kalluumeysiga biyaha macaan. Baasaboorka Oo Ulaha U Kala Bax
Waligaa Ha Joogin Kaymaha Intaad Ugaadhsanayso
Maqaalkani waxaa loogu talagalay ugaarsadayaasha dhabta ah. Waxaan rabaa inaan ku caawiyo dhamaantiin banaanka jooga oo sanado badan ugaarsanayay nasiib yar. Kani maaha maqaal qalafsan ee waa run waana idin siin doonaa xaqiiqooyinka. Laga soo bilaabo sanado badan oo ugaarsi ah iyo kumanaan doolar oo luntay waxaan helay waxa shaqeeya. Waxaan jeclahay inaan raaxo helo inta aan ugaarsanayo mana jecli inaan guriga ku soo laabto anoo faro madhan. Tirada ugu horeysa ee guusha ugaarsiga waa inaysan ku jirin kaynta. Imisa jeer ayaad ku jirtay kaynta oo deero aakhirkii kugu soo turunturootay inay indhaha kaa eegto, xiiq iyo tumasho, markaa kala-bax intaadan toogan? Haddaadan ku jirin kaynta taasi weligeed ma dhacday. Ka waran waqtigii qabowgu sidaa darteed aad xirxiratay ayaad dhowr mayl socotay geed fuulid ka dibna waxaad kufududay lacagtii nolosha maxaa yeelay dabayshu way is bedeshay? Mar labaad hadaadan ku jirin kaynta taasi waligeed ma dhici lahayn. Tani waa hab kale oo taas laguugu macnayn karo. Intaad u baxdo dukaameysiga waxaan helayaa qolal ugaarsi ah oo isku midab ah iyo qaab isku mid ah darbigaaga waxaanan istaagayaa dhaqdhaqaaqooda. Waa maxay fursadda aad ku ogaan doontid wax inaysan sax ahayn? Hadda sidee ku saabsan oo aan u helayaa guri eey ah oo soo baxaya oo indhoole ah oo aan fadhiisanayaa koonaha gurigaaga waana isku midab iyo isku mid wax kasta oo aaggu yahay? Waxaan u maleynayaa inaysan jiri doonin wax nacas ah haba yaraatee! Waan ogahay waxa dhacaya haddii aan helo wax aad uragtay oo adiga lagaa yaqaan oo aan nafteyda ku shubo? Mid ka mid ah dhacdooyinkaas ama isku-darka wadajirka ah miyaa nacas kaa dhigi doonaa?? Inta badan maahan! Waxa aan ku helayo waa marka aan ugaarsiga bannaanka u baxno waa sida saxda ah ee aan u galno qof gurigiisa. Tigidhka ma aha in la ogaado. Taasi way dhawaaqi kartaa “goofy” maadaama ay tani tahay waxaad horeyba u ogayd tan. Arrinta halkan ku taal adiga iyo ugaadhsade kasta oo kale ayaa shuruud looga dhigay in uu ugaarsado hab gaar ah! Qaab qaldan! Haddii aan dejino tartan dheh Hindida ugaarsatay badbaadintiisa iyo annaga taas u sameyno isboorti yaa dila ciyaarta marka hore. Xitaa kuma soo degto sababaha ugaarsiga laakiin farsamada. Ha ku jirin kaynta intaad ugaarsanaysid! Waa inaad ka mid noqotaa keymaha intaad ugaarsaneysid. U istaag sida ugu yar ee suurtogalka ah! Kuwa soo socdaa waa farsamooyin ugaarsi yar oo aan adeegsado oo shaqeynaya. Waxaan sidoo kale soo jeedinayaa inaad ku koobnaato kharashaadkaaga wax soo saar yar oo ugaarsi ah oo shaqeynaya ka dibna uma baahnid inaad wax iibsato wax aan ahayn rasaas iyo liisanka sanadaha soo socda. Farsamada ugu fiican ee aad suurtogal u isticmaali karto oo u baahan dadaal yar ayaa ah in la qodo god. Haddii aad qodato god waad dili kartaa deerada! Waxaan dilay deerada inta ugaarsiga ku jirta. Waxaad qoddaa god xagaaga ilaa 4′ qoto dheer waad ugaadsan kartaa. Tani waa istiraatiijiyad weyn sababo badan awgood. ‘ Waxaad ku arki kartaa burushka hoostiisa si sahal ah si aad u aragto cagaha kugu soo socda. ‘ Urkaaga si weyn ayaa loogu daboolay dhulka hoostiisa ‘ Qandho ama hargab kuma qabsan doontid ‘ Waxaad ku dhejin kartaa char gudaha godkaas oo raaxo leh ‘ Waxaad leedahay nasashada qoriga ugu steadiest abid dhigay (dhulka) ‘ Haddii sababo jira awgeed ay u arkaan dhaqdhaqaaq waxay badanaa u maleeyaan inaad tahay xayawaan yar ‘ Ugu dambeyntiina waxay kaa ilaalin doontaa in lagugu toogto intaad ugaarsanaysid! Runtii waxaan isticmaalaa oo keliya 2 waxyaalaha inta ugaarsiga sidan oo kale ah buste ama boorso jiidan iyo dhul indhoole. Indhoolaha ugu fiican ee la qaadi karo ee aan ku soo helay ugaarsiga noocan ah ayaa ah The Baaxadda Indhoolaha. Waxaad ka heli kartaa halkan. Waxaan ugu jeclahay indhoolahan sida ugufiican maxaa yeelay way fududahay oo dhulka kuma taagna. Waan u rogi karaa godkayga ama dabool kasta si aan isu qariyo iyadoo aan loo eegin sida ay deeradu iigu timaado. Xusuusnow ka fogow urta daboolka, isticmaal indhooleyaal yaryar oo god qod. Xusuusnow asxaabtaadu inay kaaga qosli karaan sidaan aniguba ku qoslay laakiin iyaguna waxay kugu amaani doonaan cawrada! Waligaa Ha Joogin Kaymaha Intaad Ugaadhsanayso
Sirta Ku Habsashada Joogitaanka Goolafka
Joogtaynta goolafku waa himilada golfeel kasta. Waad ogtahay inaad ku dhufan karto mid ka mid ah malaayiin tallaal ah oo aad ka hadasho daarta 19th’laakiin sida loo sameeyo samaynta tallaalkaasi badanaa? Kuwani waa dhinacyo badan oo ku saabsan iswaafajinta lulid golf-ka taas oo ka dhigi karta mid umuuqda mid culeys badan oo aan la guuleysan karin 'laakiin waxaa jira hal dhinac oo kubbada da' yar oo kasta ay tahay inay tixgeliso, taasi waxay saameyn xoog leh ku yeelan doontaa joogtaynta goolasha golf. Waan ognahay in golfers-ku ay boqolaal kubadood ku dhuftaan usbuuc kasta. Waxay qaadanayaan casharo xoogaa guul ah, laakiin maya 100% qanacsanaanta. Waa wax lagu iibsado naadiyo cusub, laakiin runtii wax isbadal ah ma sameeyeen? Miyaad hoos u dhigtay dhibcahaaga 4-6 faalig? Markaad isku dayeyso inaad ku guuleysato heer sare oo ah joogtaynta golf golf, qaybta mashiinka ayaa soo gala si loo ciyaaro. Laakiin qoditaan yar oo qoto dheer ayaa kuu horseedi doona 'dhabta'’ ka jawaab la'aantaada joogitaanka goolafka golf. Haddii aysan ku dhufanayn kubbado badan ama ama ay qaadanayso casharro badan ama inay soo iibsato qalab badan maxay noqon kartaa? Maxaa u hadhay in laga shaqeeyo? Miyaan weli kululaanayaa? Ma waxaad la socotaa halka aan ku tagayo tan? Waxaan kaliya tirtirnay waxa umuuqda wax walba miyaanay ahayn? Ma yeelin! KELIYA hal shay ayaa hadhay! Jidhkaaga! Mashiinkaaga golf-ka '. Waxa kaliya iyo kan kaliya ee sameyn kara saameyn toos ah oo ku dhow isla markiiba ku yeelashada joogteynta golf-kaaga iyo awoodda. Markaad cagta mariso goobta golf-ka, miyaad dareentaa sida jidhkaagu si hufan ugu socdo inta lagu jiro lulid golf-kaaga? Miyaad dareentaa inaad ku noqon karto leexasho buuxda xiisadaha ugu yar? Miyaad ku jiri kartaa dheelitirka intaad ku dhex socoto golf-kaaga oo dhan 18 godad? Haddii aad ku jawaabtay maya mid ka mid ah waxyaalaha kor ku xusan 'waa waqtigiisa' inaad ku sii socoto!’ Waa waqtigii aad noqon lahayd ‘golf golf!’ Mar dambe kuma sii socon doontid sanduuqa shaaha oo waxaad u dareemi doontaa sida qaab-ka-baxsan, ahaa. Waxaad yeelan doontaa heer aad u sarreeya oo kalsooni leh, iyo waxqabadkaaga golf ayaa tusi doona. Markaad dhaqaajiso jirkaaga, farsamooyinka lulid golfkaaga iyo joogteynta lulid golf si dabiici ah u dhici doona. Uma baahnid inaad ku adkeyso arrintaas. Waad sii deyn kartaa oo waad ciyaari kartaa. Waxaa la joogaa waqtigii hab cusub oo loogu talagalay hagaajintaada golf-iyo wuxuu bilaabmayaa hadda! Waxaad gaari doontaa heerar cusub oo waxqabad iyo joogtaynta ciyaarta lulid golf. Sirta Ku Habsashada Joogitaanka Goolafka
Xirmooyinka At Broncos: U Dagaalamo Qeybinta Sarraynta
Waa toddobaad 11 NFL iyo Chargers iyo Broncos labaduba waa 7-2 gudaha AFC West. Toddobaadkan labada titan waxay ku tagayaan Denver. Khatar ayaa ku jirta kaalinta koowaad ee AFC West iyo suuragalnimada cinwaanka qaybinta. Labadan koox ayaa is-ballaarin doona mar kale bisha Diseember 10 gudaha San Diego. Chargers San Diego ayaa badiyay seddex kulan oo isku xigta, oo ay kujirto guul wacan Cincinnati usbuucii hore. Bengals ayaa kor u kacday 21-0 hal dhibic, laakiin Chargers-ka ayaa sii xirnaanayay. Ciyaarta ayaa si deg deg ah isugu bedeshay toogasho weerar ah. Waxaan u maleynayaa in difaacyadu ay galeen fasax shaah ah. Chargers ayaa ku guuleystay ciyaarta 49-41. Halka guushu ay ahayd mid weyn, Waxaan yara walaacsanahay difaaca Chargers. Way quusteen 41 Dhibco. Iyaguna way quusteen 24 iyo 25 dhibcaha usbuucyadii hore ee Rams iyo Browns’and 27 ku Taliyayaasha. Waxay la kulmayaan difaac bakhayl ah oo ku yaal Broncos iyo difaaca eedeymaha waa inay kor u kacaan. Broncos ayaa badisay labo xiriir ah iyo lix ka mid ah toddobadii kulan ee ugu dambeysay. Khasaaraha keligii ayaa qalbi jab ku ahaa guriga Colts’34-31. Halka difaacoodu ahaa xiddig, dembigooduna waxoogaa la rabo in laga tago. Waxay ku baxsadeen Oakland usbuucii la soo dhaafay iyagoo leh 17-13 guul guul. Tani waxay noqon kartaa guul-u-gaarista koox kasta. Labada kooxba waxaa u harsan labo ciyaarood oo adag. Labaduba way wada ciyaaraan markale iyo Taliyayaasha. Labaduba waxay leeyihiin dhowr kulan kasta. Si kastaba ha noqotee, mid waliba wuxuu leeyahay hal ciyaar oo adag oo aan lahayn cid ka soo horjeedda. Broncos waxay ku ciyaaraan gurigooda Bengals. Dhanka kale, Chargers ayaa u safraya Seattle si ay ula kulmaan koox adag oo ka socota Seahawks garoonka Qwest Field. Ku alla kii ku guuleysta ciyaartan wuxuu lahaan doonaa hal ciyaar oo dheeri ah -taasna waxay noqon doontaa mid aad u muhiim ah. Labada kooxba waxay ku dhammeyn karaan natiijooyin isku mid ah inta soo hartay. Xirmooyinka At Broncos: U Dagaalamo Qeybinta Sarraynta
Qeybteyda Abaal Marinta Memorabilia ee Kubadda Baseball
Dib ugu noqo maalinta … Waxaan la macaamili jiray kaararka baseball, iyo xoogaa xusuus ah bartamihii ilaa dabayaaqadii 1980's. Iyada oo loo marayo macmiil hore waxaan fursad u helay inaan iibiyo gabal aad u yar oo baseball lore ah. Qeybta aan aadka u jeclaa waxay ahayd dukumiinti naadir ah oo uu saxiixay Harry Wright. Aabe aasaasay ciyaarta. Dukumiintiga wuxuu ahaa qandaraas ciyaartoy qaar uu saxiixay Harry Wright, maamulaha, qiyaastii 1870. Waxaa lagu qoray Cincinnati Red Stocking’s letterhead. Waan la dhacay. Aad ayaan ugu faraxsanahay in laygu aaminay qalabkan dhifka ah. Waxaan xasuustaa in aan is iri. 'Ilaahayow. Waa inaad kaftamaysaa.’ Waan yaabay. Waxaan ahaa cabsi. Waxaan dareemay sidii laygu dayay koox gaar ah. Waxaan gabalkii ku iibiyey inta u dhexeysa $10,000 – $12,000 haddii xusuustu ii adeegto. Laakiin iibinta gabalku isma barbardhigayo riyadii aan ka qabay qandaraaska. Bal qiyaas, sida ay ahayd inay ahaato 130 sanado kahor garoonka kubada. Labiska shandadaha wata, iyo galoofyada dhallinta yar ee loogu talagalay ciyaartoyda. Weelasha, Tuurista labada ciyaarood ee madax labalaabku waxay ahayd caado caadi ah oo orod gurigu wuxuu ahaa mid naadir ah. Wiil ciyaar baa la beddelay. Wax ka qabashada dukumintigaas ayaa waqtiyadii hore ee baseball iga dhigtay run. Waxaan indha indheeyay raggaas oo ku ciyaaraya garoommadaas duugga ah. Waxaan dareemay inaan kamid ahay waqtigaas. Riyo ayaan qabay. Waan joogay, dib dabayaaqadii 1800 ee fadhiga tarabuunka. Dhoola cadeynta iyo daawashada baseball – Dib ugu noqo maalinta. Wax ka qabashada farshaxanimadan waxay la mid ahayd sidii saacad saacad oo kale oo aan marna la feerin. Waxaan ku jiray xusuusta baseball-ka. Waan arkaa sababta ay dadka qaar ugu xamaasad badan yihiin waxyaabaha lagu xasuusto baseball. Khiyaaligooda kubbadda cagta ayaa macno badan ii yeelay markii aan iibiyey qaybtan Harry Wright. Qeybteyda Abaal Marinta Memorabilia ee Kubadda Baseball
Wax Cusub oo Kabaha Lagu Kordhiyo? Baro Talooyinka Ugu Horeeya ee Khiyaamada Skateboard ee ay tahay inaad barato
Marka waxaad dooneysaa inaad barato sida skateboard-ka sida kuwa wanaagsan? Waa hagaag ka hor intaadan taas sameyn, waxaad ubaahantahay inaad kubilaawdo talooyin khiyaano skateboarding aasaasi ah oo kaa caawinaya inaad socoto. Halkan waxaa ku yaal hal xeelad skateboard weyn oo u fiican bilowga. Indy Grab Mid ka mid ah tabaha ugu fudud uguna isticmaalka badan ee skateboarding-ka waa Indy Grab. Halkani waa meesha aad ku arkeyso skaters hawo qaadanaya, foorarsanaya oo qabanaya sabuuradooda. Waxay umuuqataa runtii qabow, waana mid ka mid ah talooyinka khiyaanada skateboard-ka ee ugu horreeya ee ay tahay inaad barato. Waxa ugu horreeya ee aad rabto inaad sameyso waa inaad barato sida loo sameeyo Ollie-ka. Markaad ogaato sida tan loo sameeyo, waad ku dari kartaa Indy Grab. Intaad fuushan tahay, waa inaad cagtaada hore ku haysataa dhexda sabuuradda, iyo cagtaada dambe ee dabada looxa. Waxaad hoos ugu degi doontaa sabuuradda iyo cagahaaga dambe oo aad isla boodi doontaa. Waxaad udhigi doontaa jirkaaga sabuuradda si uu u ahaado xitaa. Tani waa tallaabooyinka aasaasiga ah ee Ollie. Markaad tan hoos u dhigto, waad soo dhaadhacaysaa inta aad hawada ku jirto oo waxaad qabsan doontaa looxa inta udhaxeysa cagahaaga. Sii daa intaadan dhulka ku dhicin, had iyo jeerna jilbahaaga foorari si ay u nuugto naxdinta soo degitaanka. Waxaad ku samayn kartaa khiyaamadaan dariiqa kore, sidaad uga soo baxaysid geeska fidsan, ama waxaad ku sameyn kartaa dhul fidsan. Mid ka mid ah talooyinka khiyaamada skateboard-ka ugu fiican ayaa ah inaad isku daydo oo aad sare u kacdo intaad awooddo. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad hesho waqti kugu filan oo aad kaga soo bixiso Indy Grab. Haddii aad rabto inaad ku aragto xeelado skateboard aad u horumarsan oo ficil ah waxaad ku arki kartaa qaar ka mid ah fiidiyowyada bilaashka ah http://Www.skateboardtricktips.net Wax Cusub Oo Kabaha Lagu Kordhiyo? Baro Talooyinka Ugu Horeeya ee Khiyaamada Skateboard ee ay tahay inaad barato
Noocyada Feerka: Saddexda Nooc ee Waaweyn
Waxaa jira saddex nooc oo qaabab waaweyn ah oo feeryahannadu ku dhacaan markay feedhka ciyaarayaan. Kuwani waxay ka tarjumayaan sida ay u dhaqaaqayaan iyo sida ay wax u garaacayaan. Guud ahaan waxaa loo maleynayaa in qaababku ay aad u badan yihiin dhagax, warqad, maqas hal qaab ah ayaa garaacaya midkale halka guud ahaan laga badin doono midka seddexaad. Si kastaba ha noqotee, tan marar badan ayaa la beeniyay oo kaliya waxaa loo aqbalay inay run tahay. Qaabka koowaad ee aan sheegi doonno waa Brawler. Feeryahan nuucaan ah guud ahaan wuxuu feerayaa hal feer iyo xoog badan oo ka dhan ah kan ka soo horjeeda. Dagaalyahanno badan ayaa awood u leh inay tuuraan feer kaasoo ku ridi kara qof ka soo horjeeda hal mar oo keliya. Dhibaatada ugu weyn ee farsamadan dagaalku waa sida gaabiska ah ee feeryahannadu badanaa u feeraan. Iyagoo gaabis ah si fudud ayaa looga hortegi karaa. Nooca xiga ee qaabku waa ka Dagaal-Gudaha. Nooca noocan ah waxaa badanaa loo ciyaaraa si aad u xoog badan wuxuuna ku daraa 'wejigaaga’ nooca ciyaarta. Fikradda ayaa ah in feeryahanku uu helo oo uu u dhawaado kan ka soo horjeeda isla markaana uu ku dhufto dhowr feedh oo degdeg ah. Tani waa fasal aad u wanaagsan oo ay u isticmaali doonaan feeryahannada miisaanka dhex-dhexaadka ah. Nooca ugu dambeeya ee qaabku waa kan Dagaal-Dibadeedka. Feeryahannada adeegsada nuuca noocan ah waxay guud ahaan u jiheysan doonaan banaanka giraanta waxayna ka shaqeyn doonaan sidii dadka ka soo horjeedaa ay uga fogaan lahaayeen iyaga. Fikraddu waa inaad ka daaliso qofka kaa soo horjeedaa halkii aad ka saari lahayd. Qaabkan waxaa badanaa ciyaara feeryahannada fasalka fudud ee aan lahayn awood loogu talagalay feedh culus. Waxaa jira feeryahanno qaarkood oo ku fiicnaaday adeegsiga dhammaan qaababkan si ay uga faa'iideystaan. Iyagoo adeegsanaya noocyo badan oo qaab ah waxay ka ilaalin karaan kan ka soo horjeeda miisaanka sida ay u ciyaari doonaan. Qaar ka mid ah kuwa ugu fiican ayaa ah Dagaalyahanada kuwaas oo sidoo kale isticmaali kara cag fiican iyo xawaare. Noocyada Feerka: Saddexda Nooc ee Waaweyn
Even as you contemplate on getting a golf gift for a close friend or acquaintance, you may have heard other golfers complain on numerous occasions about how useless some golf aid equipment they spent a fortune on turned out to be. This is not to say that golf products designed to improve golfer’s games do not work. They do and they are the perfect golf gift, if you can get it right. The problems folks get with golf products in most cases is because of a failure to focus on the particular weakness that requires improvement and then doing your shopping with adequate knowledge so that you do not have to rely on the shop assistant whose work it is to sell you as much as they possibly can. For example when considering a golf gift, it would be difficult to go wrong with a weighted club. This is the sort of golf improvement gift product that is very golf-specific. It works well to develop and condition all the muscles you use frequently in every golf swing you make on the course. Exercise tubing would also make an ideal golf gift. The beauty of this product is that it allows you to break down the golf swing into the many different phases and thus allows you to make improvements to the various different segments of the golf swing. What is even more attractive about this golf gift is the price. It costs approximately $20-$25. The stability ball is another ideal golf gift. Golf kasta oo leh dhabarka xun waa inuu lahaadaa mid. With the right guidance and advice, you can do so many different stretches using the stability ball. It can even be easily used in an office to do the stretches in brief moments away from your work station. In getting a golf gift you should also consider hand weights. And these are not for the purpose of developing huge muscles, there are golf-specific exercises that concentrate on ‘golf muscles’ and can help improve anybody’s game. Hand weights cost only 50 cents a pound and are very portable. In your search for a golf gift, you can even get more specific and select a training aid specific to the particular weakness of the golfer that you are targeting. For instance the Inside Approach is ideal in correcting the problems associated with slicers and would make for an unforgettable golf gift for a slicer. Selecting A Golf Gift That No Golfer Will Forget